Afaka miala amin'ny chimiothérapie ny mararin'ny homamiadan'ny nono amin'ny dingana voalohany
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Afaka miala amin'ny chimiothérapie ny mararin'ny homamiadan'ny nono amin'ny dingana voalohany
Ny Exact Sciences Corp. androany dia nanambara fa ny angona avy amin'ny Rx for Positive Node, Endocrine Responsive Breast Cancer, na RxPONDER, dia navoaka tao amin'ny The New England Journal of Medicine. Ny National Cancer Institute (NCI), dia namaritra soa aman-tsara ny tombotsoa azo avy amin'ny chimiothérapie amin'ireo mararin'ny kanseran'ny nono, node-positive amin'ny Oncotype DX Breast Recurrence Score® valin'ny 0 hatramin'ny 25. Symposium (SABCS). Nohamafisina amin'izao fotoana izao ny valim-pikarohana ato amin'ity boky navoakan'ny mpiara-mianatra ity.
Ny tena zava-dehibe dia tsy nisy tombony azo tamin'ny chimiothérapie na inona na inona ny isan'ny nodes voakasik'izany, na ny haavon'ny fivontosana na ny habeny. Ao amin'ny vehivavy premenopausal miaraka amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 nodes tsara, dia nisy tombony azo avy amin'ny chimiothérapie manan-danja amin'ny statistika.
Manodidina ny iray ampahatelon'ny marary voan'ny hormone receptor (HR)-positive, HER2-negative kanseran'ny nono tany am-boalohany dia manana fivontosana izay niparitaka tany amin'ny lymph node. Ny ankabeazan'ireo marary ireo dia mahazo chimiothérapie amin'izao fotoana izao na dia eo amin'ny 85% amin'izy ireo aza dia manana valiny 0 ka hatramin'ny 25 ny fiverenana.
Miorina amin'ny valin'ny RxPONDER, ny National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) v dia nanavao ny torolàlana momba ny homamiadan'ny nono ary nanaiky ny fitsapana Oncotype DX Breast Recurrence Score ho ny fitsapana tokana azo ampiasaina amin'ny faminaniany ny tombontsoa azo avy amin'ny chimiothérapie amin'ny nono voalohany. mararin'ny homamiadana manana 1 ka hatramin'ny 3 node lymphatique axillary tsara, ao anatin'izany ny micrometastases.vi Ny fitsapana Oncotype DX izao no hany fitsapana voasokajy ho "tiako" miaraka amin'ny porofo avo indrindra momba ny node-negative sy postmenopausal node-positive (1 hatramin'ny 3 nodes positive). ) marary. Ankoatr'izay, ny NCCN dia manoro hevitra ny handinika ny fitsapana mba hanombanana ny prognosis amin'ny marary voan'ny node premenopausal izay kandidà amin'ny chimiothérapie.
Iray amin'ireo fitsapana klinika lehibe indrindra amin'ny node-positive, HR-positive, HER2-negative kanseran'ny nono tany am-boalohany, RxPONDER dia nisoratra anarana vehivavy mihoatra ny 5,000 miaraka amin'ny node tsara telo. Ny fandalinana mety ho an'ny dingana III dia natao tamin'ny toerana 632 tany amin'ny firenena sivy - Etazonia, Kanada, Meksika, Kolombia, Irlandy, Frantsa, Espaina, Korea Atsimo ary Arabia Saodita. Ny vehivavy miaraka amin'ny valim-piverenan'ny 0 ka hatramin'ny 25 dia natao kisendrasendra tamin'ny fitsaboana hormonina irery na chimiothérapie arahin'ny fitsaboana hormonina. Ny mararin'ny kisendrasendra dia nozaraina araka ny valin'ny Recurrence Score, ny toetry ny menopause ary ny karazana fandidiana lymph node. Ny fanadihadiana fanampiny sy ny fanaraha-maso ny marary fanampiny dia nomanin'ny mpanadihady SWOG.